Kanzuru yeMasvingo Yokurudzira Vagari Vane Zvinyunyuto Kumhan'ara Kwairi
Vanotengesa miriwo nembatya vanoti vari kutorera zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru muMasvingo (File Photo)
Kanzuru yeMasvingo iri kukurudzira vagari vane zvichemo nemashandiro emapurisa ekanzuru kuti vanomhan’ara nyaya dzavo kukanzuru.
Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevamwe vagari vekuMasvingo vanorarama nekutengesa mbatya dzemumabhero, avo vari kupomera mapurisa eZRP pamwe neekanzuru yeguta mhosva yekuvatorera mbatya dzavo vachizodzishandisa ivo, izvo zvavanoti hazvisi pamutemo.
Meya weguta reMasvingo VaHubert Fidze vakurudzira vanhu vane zvichemo nemashandiro emapurisa kuti vamhan’are kana vachifunga kuti pane mhosva yaparwa.
“Nemutemo hapana anobvumidzwa kuti kana atora zvinhu anoshandisa. Mutemo unoti zvakaita semuriwo nematomatisi zvinoparadzwa asi zvakaita sembatya hazvibvumirwi kuti zvipfekwe. Saka tinokuridzira kuti vauye vamhangare kana vaona vanoita izvi,” VaPfidze vanodaro.
Mashoko aya anotevera musangano wakaitwa svondo rino muMasvingo nesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy (Zichea).
vanotengesera mumigwagwa ava vakati vari kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa.
Muzvare Sharon Magombedze mumwe anoti anogara achitorerwa zvinhu zvake.
“Isu sema informal traders tiri kuchema nenyaya yekuti vekanzuru vakatitorera mabhero edu tozoona vavakutengesa kana kuti vakapfeka nhumbi dzedu uye tozoona mhuri dzavo dzava kupfeka.”
Vagari ava vanoti kutandaniswa nemapurisa nekutorerwa zvinhu zvavo kutyorwa kwekodzero dzavo sezvo vari kutsvaga kurarama nekutengesa mumigwagwa.
Nhamo yapfunya chisero munyika yapa kuti dhorobha rose reMasvingo rizare nevanhu vanenge vachitengesa mbatya dzine mutengo uri pasi mumigwagwa, izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vasaende kuzvitoro zvikuru kunotenga mbatya.
Vamwe vakapinda mumusangano uyu vanoti vashandi vekanzuru vari kutorerawo vanotengesa muriwo nematomatisi zvinhu zvavo vachiendesa kudzimba dzavo.
Amai Nelia Gomo vanoti mhuri dzemapurisa dzave kutorarama nekudya zvekupamba.
“Vanotengesa zvechikafu matomatisi nemavheji vanotorerwawo futi, vekanzuru havachatengi izvi kudzimba dzavo vanotodaidza madzimai avo kuti vatore vaendese kumba kundobika,” vanodaro Amai Gomo.
Asi vagari vanoti kunyangwe kune mutemo wekuti ukatorerwa zvinhu unoenda kukanzuru wonobhadhara faindi, vakaendako vanosvika vachishaiwa zvinhu zvavo nekuti zvinenge zvatoendeswa kudzimba dzevashandi ava.
Munyori mukuru weZichea, VaWisborn Malaya vati vanorwadziwa nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo.
“Tatonzwa dambudziko rakakura muMasvingo zvekuti vanhu vanotorerwa zvinhu zvavo, Isu se organization takawana mukana wekutaura nevakuru vekanzuru saka tichashandisa mukana uyu tikwanise kutaura nezvenyaya iyi tine humbowo kuti dambudziko iri rigadziriswe.”
Mutauriri we mapurisa muMasvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura neStudio 7 vachiti vainge vasiri muhofisi sezvo vainge vaenda kuHarare.
Nyaya yekutengeswa kwembatya idzi inonziwo nevanogadzira nhumbi munyika iri kukanganisa mabasa avo zvakanyanya.
Hurumende haibvumidzewo vanhu kutenga mbatya idzi kunze asi vakawanda vanonzi vanongodzipinza munyika zvemukoto.